အလုပ်ခွင်မှာဝန်ထမ်းကောင်းတွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်….✋ – Trend.com.mm
Posted on September 29, 2018 September 26, 2018 by Shun Lei Phyo
အခုလက်ရှိကိုယ်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ လူကြီးဖြစ်နေရင်သော်လည်းကောင်း ၊ နောင်တစ်ချိန် ကိုယ်အလုပ်ရှင် လူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ် ဆိုရင်သော်လည်းကောင်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်မဆုံးရှုံးရလေအောင် ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာလေးတွေသုံးသင့်သလဲ..
ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ဆိုတာကိုမြင်သာအောင် ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြပါ။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို တာဝန်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုလိုလို ဒီလိုလို နဲ့ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်တာဝန်မှာ ဘယ်ရာထူးအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားပါ။
သူတို့တာဝန်ယူထားတဲ့ အပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်တဲ့သဘောထားတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချခွင့်ပေးပါ။ ကိုယ့်Idea ကို အသုံးချခွင့်မရှိပဲ အပေါ်က ညွှန်ကြားသလိုပဲ လုပ်နေရတာကြာရင် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ မတိုးတက်ဘူးဆိုပြီးဒီလုပ်ငန်းမှာကြာကြာနေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
3. လိုအပ်ချက်ကို ကူညီပါ
သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို တက်နိုင်သမျှ ဖေးမကူညီပေးပါ။ အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ဆိုပြီး အလုပ်သဘောကြီးသီးသန့်မဟုတ်ပဲ ဒီဝန်ထမ်းဟာ ဒီလိုမြေတောင်မြှောက်ပေးရင် ပိုတိုးတက်နိုင်တယ် ၊ ဒီလို အခွင့်အလမ်းတွေသူ့ကိုပေးသင့်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အကျိုးမလိုသောစိတ်ထားနဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါ။
4. တော်ရုံတန်ရုံ အမှားကို လက်သင့်ခံပါ
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်တောင် အမှားတွေကြားထဲက နေ ဒီလိုနေရာမျိုးကို ရောက်လာတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ဒါကြောင့်တော်ရုံ အဖြစ်စလောက် မမှားလေးတွေကို ၀န်ထမ်းဘက်ကလုပ်မိတဲ့အခါနောက်တစ်ကြိမ် မဖြစ်အောင်သတိပေးပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
ကိုယ့်ဝန်ထမ်း ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားမလို့ မလေးမစားဆက်ဆံတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်ကသူတို့ကို လေးစားသမှုနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှသာ သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းကိုယ့်ိကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းသဖွယ်မှတ်ယူပြီးကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ နေပျော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတိုင်းဟာ ဒေါသထက် ဂရုဏာကို ပို ထားတက်တာကြောင့် နေရာတကာမှာ ကိုယ့်ဘက်ကြီးပဲမကြည့်ပဲ ၀န်ထမ်းတွေအတွက်ပါထည့်တွေးမှ ၀န်းထမ်းလည်းစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာပြီး လုပ်ငန်းလည်းတိုးတက်နိုင်မှာပါ။ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောာက်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ရော စာရိတ္တပိုင်းအရပါသင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေကို မဆုံးရှုံ့းစေဖို့ရည်ရွယ်ရင်း…
အခုလကျရှိကိုယျဟာ အလုပျခှငျမှာ လူကွီးဖွဈနရေငျသျောလညျးကောငျး ၊ နောငျတဈခြိနျ ကိုယျအလုပျရှငျ လူကွီး တဈယောကျဖွဈလာဖို့ရှိတယျ ဆိုရငျသျောလညျးကောငျး ကိုယျ့လုပျငနျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ကောငျးမှနျတဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျမဆုံးရှုံးရလအေောငျ ဘယျလိုနညျးဗြူဟာလေးတှသေုံးသငျ့သလဲ..
ကိုယျ့လုပျငနျးခှငျရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြကဘာလဲ ဆိုတာကိုမွငျသာအောငျ ကိုယျ့ဝနျထမျးတှကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးခပြွပါ။ ဝနျထမျးတဈယောကျကို တာဝနျပေးတဲ့နရောမှာလညျးဟိုလိုလို ဒီလိုလို နဲ့ ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျခိုငျးတာမြိုးမဟုတျပဲ ဘယျသူ့ကို ဘယျတာဝနျမှာ ဘယျရာထူးအနနေဲ့ထားမယျဆိုတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသတျမှတျထားပါ။
သူတို့တာဝနျယူထားတဲ့ အပိုငျးနဲ့ပတျသတျပွီး သူတို့ရဲ့လှတျလပျတဲ့ အတှေးအချေါလှတျလပျတဲ့သဘောထားတှေ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခခြှငျ့ပေးပါ။ ကိုယျ့Idea ကို အသုံးခခြှငျ့မရှိပဲ အပျေါက ညှနျကွားသလိုပဲ လုပျနရေတာကွာရငျ ဝနျထမျးတဈယောကျဟာ မတိုးတကျဘူးဆိုပွီးဒီလုပျငနျးမှာကွာကွာနခေငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။
3. လိုအပျခကျြကို ကူညီပါ
သူတို့ရဲ့လိုအပျခကျြကို တကျနျိုငျသမြှ ဖေးမကူညီပေးပါ။ အလုပျသမားအလုပျရှငျဆိုပွီး အလုပျသဘောကွီးသီးသနျ့မဟုတျပဲ ဒီဝနျထမျးဟာ ဒီလိုမွတေောငျမွှောကျပေးရငျ ပိုတိုးတကျနိုငျတယျ ၊ ဒီလို အခှငျ့အလမျးတှသေူ့ကိုပေးသငျ့တယျဆိုပွီး ကိုယျ့ဘကျကလညျး အကြိုးမလိုသောစိတျထားနဲ့ ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးပါ။
4. တျောရုံတနျရုံ အမှားကို လကျသငျ့ခံပါ
လူတိုငျးဟာ အမှားနဲ့မကငျးပါဘူး။ ကိုယျတိုငျတောငျ အမှားတှကွေားထဲက နေ ဒီလိုနရောမြိုးကို ရောကျလာတယျဆိုတာမမပေ့ါနဲ့။ ဒါကွောငျ့တျောရုံ အဖွဈစလောကျ မမှားလေးတှကေို ဝနျထမျးဘကျကလုပျမိတဲ့အခါနောကျတဈကွိမျ မဖွဈအောငျသတိပေးပွီး ခှငျ့လှတျနိုငျအောငျကွိုးစားပါ။
ကိုယျ့ဝနျထမျး ကိုယျ့လကျအောကျငယျသားမလို့ မလေးမစားဆကျဆံတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ ကိုယျကသူတို့ကို လေးစားသမှုနဲ့ဆကျဆံပွောဆိုမှသာ သူတို့စိတျထဲမှာလညျးကိုယျိ့ကို ခေါငျးဆောငျကောငျးသဖှယျမှတျယူပွီးကိုယျ့လုပျငနျးမှာ နပြေျောမှာဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျကောငျးတိုငျးဟာ ဒေါသထကျ ဂရုဏာကို ပို ထားတကျတာကွောငျ့ နရောတကာမှာ ကိုယျ့ဘကျကွီးပဲမကွညျ့ပဲ ဝနျထမျးတှအေတှကျပါထညျ့တှေးမှ ဝနျးထမျးလညျးစိတျခမျြးသာ ကိုယျလညျးစိတျခမျြးသာပွီး လုပျငနျးလညျးတိုးတကျနိုငျမှာပါ။ ဝနျထမျးကောငျးတဈယောာကျရဖို့ဆိုတာမလှယျပါဘူး ၊ ကြှမျးကငျြမှုအားဖွငျ့ရော စာရိတ်တပိုငျးအရပါသငျ့တျောကောငျးမှနျတဲ့ ဝနျထမျးကောငျးတှကေို မဆုံးရှုံ့းစဖေို့ရညျရှယျရငျး…
HIV/AIDSခံစားခဲ့ရတဲ့ Celeတစ်ချို့ အကြောင်းသင်တို့သိပါသလား…😒😒